Factorylọ ọrụ China na Vermiculite ụlọ ọrụ China Lingshou
Vermiculite bụ ụdị mineral a na-eji edozi etinyere Mg na degenerates nke abụọ site na silicates hydrated. A na-etolite ya site na ihu igwe ma ọ bụ mgbanwe hydrothermal nke biotite ma ọ bụ phlogopite. Site na nkebi, vermiculite nwere ike ekewa n'ime vermiculite na-anaghị akọwapụta yana gbasaa vermiculite. Ejiri agba site na agba, a ga-ekewa ya na ọla edo na ọla ọcha (ọdụ). Vermiculite nwere njiri mara mma dịka mkpuchi ọkụ, mgbochi oyi, mgbochi nje, mgbochi ọkụ, mmịnye mmiri na nnabata ụda, wdg Mgbe a na-eme ya maka nkeji 0,5 ~ 1.0 n'okpuru 800 ~ 1000 ℃, olu ya nwere ike ịbawanye ngwa ngwa site na 8 ruo 15 ugboro, ruo ugboro iri atọ, na agba gbanwere ka ọ bụrụ ọla edo ma ọ bụ ọla ọcha, na-emepụta ihe na-acha uhie uhie na-egbu egbu nke na-abụghị mgbochi acid na adịghị mma na arụmọrụ eletrik. Vermiculite mgbe usoro mmeba ahụ ga-amalite na ọdịdị dị larịị, na nha n'ozuzu ya bụ 100-200kg / m³ (N'ihi nnukwu olu nke gbasaa vermiculite, ọnụ ahịa ụgbọ njem ga-adị nnukwu, yabụ ebugharị ebugharị na-abụkarị ụdị nke enweghị atụ) .
Nkọwapụta ụdị nke vermiculite: 0.15-0.5mm, 0,5-1mm, 1-3mm, 2-4mm, 3-6mm, 4-8mm, 8-16mm.
Njirimara nke Akụrụngwa na Chemical nke Vermiculite
N'ihi ogo dị iche iche nke hydration na oxidation, ihe ndị mejupụtara kemịkal nke vermiculite abụghị otu. Usoro kemịkal nke vermiculite bụ: Mg x (H2O) (Mg3 — x) (ALSiO3O10) (OH2)
Ngwa nke Vermiculite
Na oru ugbo, enwere ike iji ahihia ogwu mee ihe dika ihe eji acho onodu ala, n'ihi ngbanye onu ya na nnabata ya, meziwanye ihe eji eme ala, ichekwa mmiri na imeju ala, megharia ihe omimi na mmiri, mee ka ala acid gbanwere n’ime ala na-anọpụ iche; vermiculite nwekwara ike rụọ ọrụ na-echekwa, na-egbochi mgbanwe ngwa ngwa nke uru PH, mee ka ntọhapụ nke fatịlaịza na ọkara nke ihe ọkụkụ, ma na-enye ohere iji ntakịrị ihe na fatịlaịza maka ihe ọkụkụ ma ọ dịghị emerụ ahụ. Enwere ike inye Vermiculite maka akuku ahụ nwere K, Mg, Ca, Fe, na ụdị ọnụọgụ nke Cu, Zu. Dị ka mmịpụta, mgbanwe cation na njikwa ihe mejupụtara kemịkalụ nke vermiculite, yabụ ọ na-arụ ọrụ mmezi fatịlaịza, njigide mmiri, nchekwa mmiri, ihe nchekwa na ịnweta ịnweta, yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Nyocha ndị ahụ gosipụtara: tinye 0,5-1% gbasawanyere vermiculite gbakọtara na ifati, mee ka mkpụrụ ọkụ belata site na 15-20%.
N'ime ahihia, enwere ike iji vermiculite maka ifuru, akwukwo nri, mkpuru nkpuru osisi, ozuzu na ihe ndi ozo, mgbakwunye maka ikpo ahihia na ndi na-aru oru, kamakwa maka odighi ala. Banyere ịbụ ahihia - nri ahịhịa ga - eme ka e nwee osisi ndị na - akọ nri, ebe a na - azụ ahịa, ọ bụ uru nke ịmị mkpụrụ na ibuga osisi. Vermiculite nwere ike ịkwalite mmepe nke mkpụrụ osisi na uto nke mkpụrụ, nwere ike ịnye mmiri na nri nri nke osisi na-eto ogologo oge, ma mee ka okpomoku ahụ kwụsie ike. Vermiculite nwere ike ime ka osisi nweta mmiri zuru oke na mineral na mbido mbụ, kwalite osisi ka ọ na-eto ngwa ngwa, ma nwekwuo mmepụta ya.
Mic gbasawanyere na mbara ikuku, nke etinyere n’elu ụlọ, ga-eme ezigbo ihe ọkụkụ na - egbochi mmetụta, na - eme ka ụlọ ahụ na - ekpo ọkụ n’oge oyi ma dị jụụ n’oge ọkọchị. Iji blọgụ vermiculite na mgbidi nkewapụta elu ma ọ bụ jiri ihe mgbochi vermiculite dị ka ihe nkebi n'ime ụlọ ma ọ bụ ebe ntụrụndụ, nsonaazụ nke ụda, ihe ọkụ, nchekwa ọkụ na ihe ndị ọzọ ga-egosipụta nke ọma, ụlọ ahụ ga-ebelata ibu ya. .
Ngalaba ikuku dị obere na-emewanye ka mmụba nke vermiculite, na-eme ka vermiculite gbasaa belata bụrụ ihe na - eme ka ihe gharazie isi ike. Mgbe onodu ogha bu 2000C / S, onodu a na –eme ka 5mm were nwee mmeriri mara bu 63%, 6mm 84% na 8mm 90%.
Vermiculite dị oke na iguzogide ntu oyi dịka ikike ya na ike ya na-eme otu ihe ahụ ọbụlagodi mgbe ọ na-agafe ugboro 40 nke nnwale na-enweghị ngere n'okpuru -20 ℃. Ọ dị oke mma ma nwee ihe na-anabata ihe. Ọ nwere ike idobe okpomọkụ ma gbochie oghere ikuku. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ike ịnya ụzarị ọkụ, ya mere enwere ike itinye bọọdụ vermiculite n'ime ụlọ nyocha iji dochie mbadamba ụzọ dị ọnụ iji weghara ruo 90% nke ụzarị gbasasịa. 65mm ọkpụrụkpụ vermiculite kwekọrọ na 1mm osisi ndu nke okpu.
Emebere ntụ ntụ vermiculite na-ebuwanye ibu site na vermiculite ore, calcined na oke okpomọkụ, nyocha, na-egweri. Nkọwa ndị bụ isi bụ: 3-8mm, 1-3mm, 10-20mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 60mesh, 200mesh, 325mesh, 1250mesh. Itinye aka na: ngwaọrụ mkpuchi ihe mkpuchi ụlọ, ngwaọrụ nzere ụlọ, ihe mkpuchi ụgbọ ala, ihe mkpuchi ikuku, ebe nchekwa na uwe ikuku, ụgbọ mmiri na-ere mmiri, sọmeli, ihe mkpuchi ikuku, akụrụngwa mkpuchi ụgbọ elu, akụrụngwa mkpuchi ụgbọ elu, akụrụngwa mkpuchi ikuku, ụgbọ ala, bọs akụrụngwa mkpuchi, akụrụngwa mmiri nzere mmiri, ihe nzipu nke igwe, mgbanyụ ọkụ, nzacha, nchekwa oyi, linoleum, panti ụlọ, ọka, mbadamba ọnụ ụzọ, mbipụta akwụkwọ, na mgbasa ozi dị n'èzí, na-abawanye viscosity nke eserese ahụ, osisi osisi dị nro. mpempe akwụkwọ ọkụ osisi, ink ọla edo na ọla kọpa, tee ihe ndị dị na mpụga.
Osote: Flake na agba
Mejupụtara agba Flake 560
Mica ntụ ntụ 2